China, August 28, 2014 Chishanu, June 19, 2015 Douglas Karr
Ida zvirokwazvo meseji pano kubva kuSouth Africa wekutanga mutengesi Woolworths. Dhijitari Mupepeti Sam Wilson anokurukura nezvezvigadzirwa zveSocialbaker, Analytics uye Builder, zvinoita kuti timu yake ityaire kubatanidzwa kwechiratidzo uye iunze masimba ane hukama munharaunda kuvatungamiriri vekambani. Zano raWoolworth rinopfuura kungoteerera uye kupindura kuburikidza nevezvenhau. Pane zvimwe zvinhu zvina zvakataurwa naSam izvo zvakavabatsira kubudirira, zvese kunze uye nehutungamiriri hwavo hwemukati. Analysis - kuwanikwa kwechidimbu uye dice